प्रकाण्ड अपराधी नै हुन् ? किन गरिँदैछ अदालतकै अवहेलना ?
नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका प्रवक्ता एंव पूर्वमन्त्री खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’लाई प्रहरीले पक्राउ गरेको डेढ महिना हुन लाग्यो ।
साउन २३ गते काठमाडौंमा पक्राउ परेका उनलाई सर्वोच्च अदालतले पटक-पटक रिहा गर्न आदेश दिएको छ । सर्वोच्चको आदेशपछि प्रहरी एकछिन उनलाई छोड्छ तर फेरि समातिहाल्छ । डेढ महिनामा प्रहरीले उनलाई काठमाडौं, काभ्रे, नुवाकोट, भोजपुर र दाङ र्पुयाएको छ । पछिल्लो समय उनलाई उदयपुर लगिएको छ । किन प्रकाण्डलाई देश घुमाएको घुमायै छ प्रहरी?
यसका पछाडि दुई कारण छन्न् पहिलो, गत वर्षको चुनाव आसपासमा भएका घटनामा उनको संग्लनता भन्दै परेका उजुरी । दोस्रो, सैन्य संरचना बनाउन लागेको चन्द समूहलाई निस्तेज गर्ने राज्यको नीति ।
चन्द समूहले स्थानीय तह र संसदीय चुनाव भाँड्न भन्दै देशभरि हिंसात्मक गतिविधि गर्यो । कतिपय घटनामा प्रकाण्ड संलग्न रहेको भनेर उजुरी पनि परे ।
सुरूमा उनलाई पक्रिँदा प्रहरीले ती घटनाको उजुरीभन्दा पनि सैन्य दस्ता बनाउन चन्द समूहले उठाइरहेको चन्दा मुख्य कारण थियो ।
सरकारले विप्लव समूहको अर्घाखाँची बैठकका केही दस्तावेज फेला पारेको छ । चुनावपछि चन्द समूहले देशका विभिन्न स्थानमा बेरोजगार युवा बटुलेर तालिम दिनेदेखि भारतीय माओवादीसँग मिलेर हातहतियार तथा बिष्फोटक पदार्थ जम्मा पारेको रिपोर्ट सुरक्षा निकायमा पुगेको छ ।
ती दस्तावेज केलाउँदा विप्लव समूह हिसांत्मक गतिविधिमा अग्रसर रहेको निष्कर्ष निकालेर उक्त समूहका नेतालाई पक्रने नीति लिएको सुरक्षा स्रोतले बतायो ।
स्रोतका अनुसार केन्द्रीय समिति बैठकपछि सैन्य दस्ता निर्माण गर्न कपिलवस्तु र रुपन्देहीका ग्रामीण क्षेत्रमा सो समूहका पोलिटब्युरो सदस्य भेला भएर बैठक गरेका थिए ।ती बैठकले सैन्य दस्ता निमार्ण तथा हतियार खरिदका निम्ति आवश्यक पर्ने रकम जम्मा गर्ने योजना पारित गरेका थिए । स्रोतका अनुसार प्रहरीले बरामद गरेको डकुमेन्टमा २०७३ यता साउनसम्मको आम्दानी र खर्चको विवरण उल्लेख छ ।
सात करोड ७५ लाख रुपैयाँ चन्दा बापत उठाएको र एक करोड २० लाख लडाकुको व्यवस्थापनमा खर्च भएको देखिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
पछिल्लो समय सैन्य दस्ता बलियो बनाउन सो समूहले चन्दा असुलीमा तीव्र बनाएको थियो । त्यही क्रममा साउन २३ गते काठमाडौंको चाल्नाखेलबाट प्रकाण्ड पक्राउ परे ।
सैन्य दस्ता निर्माण गर्नेदेखि चन्दा असुली र पार्टीको भावी कार्ययोजना बनाउनेमा प्रकाण्डको मुख्य भूमिका रहेको उनीबाट बरामद कागजपत्रबाट पुष्टि भएको प्रहरी दाबी छ ।
व्यापारीसँहरूग ७ करोड रुपैयाँ चन्दा असुलेको आरोपमा पक्राउ परेका उनलाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले अनुसन्धान गर्न ५ दिनको म्याद दियो ।
प्रहरी अनुसन्धानकै क्रममा साउन २७ गते प्रकाण्डलाई गैरकानुनी थुनामा राखिएको दाबी गर्दै छोरा नरेन्द्रबहादुर सिंह विश्वकर्माले सर्वोच्चमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिए ।
सर्वोच्चले प्रकाण्डलाई रिहा गर्न आदेश दियो । प्रहरीले भदौ १ गते उनलाई थुनामुक्त त गर्यो तर एकछिनमा फेरि पक्रिहाल्यो ।
त्यसपछि प्रहरीले उनीविरूद्ध देशभरि परेका उजुरीमा अनुसन्धान थाल्यो । प्रकाण्डविरूद्ध भोजपुरमा ३, उदयपुर, दाङ, काभ्रे, नुवाकोट र काठमाडौं एकरएक र कालिकोटमा १३ उजुरी परेका छन् ।
काभ्रेको नमोबुद्ध नगरपालिकास्थित ब्लुसाइट स्टोर क्रसरमा विष्फोट गराई क्षति पुर्याएको आरोप उनीमाथि थियो । आक्रमणमा चार टिपर, दुई एक्स्काभेटर र एउटा जेसिबी नष्ट भएको थियो ।
सोही मुद्दामा मोहन कार्की र कृष्ण धमलालाई प्रहरीले पक्राउ गरी मुद्दा चलाएको थियो भने प्रकाण्डलाई फरार सूचीमा राखेको थियो।
सर्वोच्चको आदेशपछि उनलाई पक्रेर काभ्रे प्रहरीको जिम्मा लगाइयो।फेरि बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट पर्यो । सर्वोच्चले पहिलेजस्तै रिहा गर्न आदेश दियो।
भदौ ८ गते प्रहरीले उनलाई नुवाकोट प्रहरीको जिम्मा लगायो ।नुवाकोट बेलकोटगढी नगरपालिका–९ भट्टथोकमा दुई स्काभेटरमा जलाएको मुद्दामा उनलाई फरार अभियुक्त बनाइएको थियो।
प्रकाण्ड पुत्रले भदौ १० गते सर्वोच्च अदालतमा फेरि रिट दर्ता गरे।सर्वोच्चले बिनासर्त उनलाई नुवाकोट जिल्ला अदालतको रोहबरमा छाड्न आदेश दियो। अदालत परिसरमा प्रकाण्डलाई छाडियो । लगत्तै ‘जरूरी प्रकाउ पुर्जी’ थमाइयो । काठमाडौंबाट विराटनगरसम्म जहाजमा र त्यहाँबाट गाडीमा राखेर उनलाई भदौ १९ गते भोजपुर पुर्याइयो ।
प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनको प्रचारप्रसारको क्रममा भोजपुरको प्रदेश ‘ख’ का उम्मेदवार शेरधन राई ९हाल प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री०लाई लक्षित गरी टेम्केमैयुङ गाउँपालिका-६ मा सकेट बम बिस्फोट भएको थियो।
जिल्ला अदालत भोजपुरले सो मुद्दामा उनलाई ६० हजार धरौटीमा छाड्न आदेश दियो ।धरौटीमा रिहा भएलगत्तै प्रहरीले उनलाई फेरि पक्रेर दाङ पठायो।
मंसिर १२ गते नेपाली कांग्रेसले तुलसीपुरमा गरेको चुनावीसभामा भएको बिस्फोटमा परी मृत्यु भएका म्यादी प्रहरीको हत्या अभियोगमा उनलाई भोजपुरबाट पक्राउ गरिएको प्रहरीको भनाइ छ।
घटना भएलगत्तै एकजनाले प्रकाण्डको निर्देशनमा घटना गराएको भन्दै बयान दिएपछि इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरले उनलाई प्रतिवादी बनाएको थियो।
भदौ २४ गते जिल्ला अदालत दाङले प्रकाण्डलाई आठ दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न समय दियो।अनुसन्धान चलिरहकै बेला फेरि सर्वोच्वमा रिट र्पयो। भदौ २८ गते नेपालगञ्जबाट जहाजमा राखेर उनलाई सर्वोच्च ल्याइयो । भदौ २९ गते बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले प्रकाण्डलाई छाड्न आदेश दियो । सो आदेशपछि रिहा भएका प्रकाण्डलाई प्रहरीले पुनः पक्राउ गरी ३० गते उदयपुर पठायो ।
उदयपुरमा चुनावका बेला बम बिस्फोट गराएको घटनामा उनलाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।उदयपुरबाट रिहा भएपछि पनि उनलाई कालिकोट पुर्याउने प्रहरीको तयारी छ । त्यहाँ उनीविरूद्ध कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग र डाँका चोरीका १३ मुद्दा छन् ।
नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता एसएसपी शैलेश थापा क्षेत्रीले विभिन्न समयमा भएका बिष्फोटका घटनामा संलग्न देखिएपछि प्रकाण्डलाई पक्राउ गरिएको बताए ।
‘उहाँलाई दुःख दिनमात्र विभिन्न जिल्ला लिएका होइनौं,’ एसएसपी क्षेत्रीले भने, ‘उहाँका नाममा अघिनै मुद्दा दर्ता भएका छन् । सोही मुद्दाको अनुसन्धान गर्न लगिएको हो ।’
प्रहरीकै खर्चमा प्रकाण्डलाई जिम्मा लिएको उनले बताए । ‘उहाँमाथि अभियोग छ, अनुसन्धान हुन्छ, तर हामीले उहाँलाई तुच्छ व्यवहार गरेका छैनौं, सम्मानका साथ राखेका छौं,’ प्रवक्ता क्षेत्रीले भने।
TagsNepal Police Prakanda